musha FOOTBALL MANAGER Antonio Conte Utano Hwokutanga Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeMutungamiri weBhola uyo anozivikanwa zvikuru nezita reNickname; 'The GODFATHER'. Our Antonio Conte Utano Nhau pamwe Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF uye ON-Pitch zvishoma zvakazivikanwa pamusoro pake. Pasina mubvunzo, Antonio Conte mutezo ane chido chisingachinji chekukunda mitambo. Avo vasingamuzivi zvakanaka kwazvo vanofunga kuti iye anononoka, asi iye murume akanaka uye pro muenzaniso wakanaka uyo anorarama uye anofema bhora.
Antonio Conte Utano Hwokutanga Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwokutanga Muhupenyu
Antonio Conte Childhood Upenyu
Antonio Conte akaberekerwa muLecce, kumaodzanyemba kweItaly musi wa 31st July 1969 kuna baba vake Cosimino Conte, mudzidzisi webhola uye Amai Ada Briamo, mudzimai wenguva yakazara weimba. Cosimino naAda vakauya naye nevanin'ina vake Gianluca naDaniele vaine mitemo yakaoma. Sezvakanga zviripo panguva iyoyo, Antonio akapedza nguva yake yekusununguka achitamba mumugwagwa uye akakurumidza kudzidza kuti ndiani aifanira kuva shamwari naye uye ndiani angadzivisa. Kunyange kana, dzimwe nguva, fisticuffs yakanga isingadzivisiki.
Muhurukuro yazvino, akataura izvi;
'Migwagwa yaimbova yebhokisi redu, uyewo tennis yedu ... Ndizvo zvose! Zvose zvino uye zvekare, kungoita chimwe chinhu chakasiyana isu tinosvitsa mutsara wechena mutsara, zvose muzita rekusika bhora rebhola yebhola. '
Antonio Conte Utano Hwokutanga Plus Untold Biography Facts -Kusangana zvose Bhodhi uye Dzidzo
Pasinei nokuti ave mutyairi webhola, baba vaAnthonio vakaramba vachitsvaka kudzidza vanofanira kuuya pakutanga kune mwanakomana wavo. Akasika mirairo nemiganhu kwaari. Kuva mubereki akasununguka uye kuita zvakanyanya seshamwari yavo, Cosimino Conte Zviri pachena kuti akaisa kumwanakomana wake izvo zvinotarisirwa kwaari uye zvinotambudzwa ndezvekusateerera mitemo yake.
Antonio Conte nababa (Cosimino Conte)
Kuchikoro, vadzidzisi vake vaiwanzobata Antonio kumusoro somuenzaniso wakanaka kuvadzidzi vaaidzidza naye uye pasinei nekupa nguva yakawanda yebhola, Antonio akanga achiri mumwe wevadzidzi vakanakisisa mukirasi yake.
'Takanga tine mukana wekuti tive nevatenzi vechokwadi shure kwedu, baba vangu vakanga vakanaka pakudzidzisa bhora. Akanga anewo uchenjeri hwokunditungamira mune dzidzo. Akanga ane mhosva yekunditendeutsa kubva pamukomana kuenda kumurume.
Antonio Conte Utano Hwokutanga Plus Untold Biography Facts -Ukama neVabereki
Zvanga zviri Juventina Lecce, chikwata chemamateere akadzidziswa uye akatungamirirwa nababa vake, icho chakapa Antonio rudo rwake rwebhola. Ukama hwake hwakasimba nevabereki vake hwakavakirwa pahutano hwekupa, kukura uye kutungamirira mwanakomana wavo kuhukuru.
Ukama hwaAlex Antonio Conte nevabereki
Antonio Conte Utano Hwokutanga Plus Untold Biography Facts -Pakutanga Football Career
Conte akatanga basa rake nevechidiki vechikwata chekumusha kwake US Lecce uye akaita sarja A kutanga neboka rekutanga pa 6 April 1986, ane makore 16, mune 1-1 inopesana Pisa. Pasi pemutungamiriri Carlo Mazzone, akazova mutambi wekutanga wekambani. MuC1987 akarova tibia yake, achiisa njodzi yekukuvara kwebasa.
Antonio Conte Utano Hwokutanga Plus Untold Biography Facts -Zvino Mutambo Basa
Mushure mokunge achinzwa kubva mukukuvara kwakakomba, achiisa pangozi basa rake rebasa nekuda kwechibhakera chakakanganiswa muhudyu rake rworuboshwe, akadzoka kumucheto achitsunga kwazvo mu 1988-1989 yegore. Wake chokutanga chinangwa naLecce uye mukati sarja A yakanga iri kurwisana Naples. Conte akapfeka jersey tsvuku uye yejeri 7 makore, nokutamba 89 mutsara uye kuverenga 1 chinangwa cheLecce.
Antonio Conte Utano Hwokutanga Plus Untold Biography Facts -Kutamba nokuda kweJuventus
Antonio Conte akatengwa nekaTurin-based club mu zhizha re 1991 nokuda kwe7 bhiri rere iyo yakaenzana nemamiriyoni zana emamiriyoni emamiriyoni ano. Akaratidza kukwanisa kushandura nguva pfupi mushure mokunge asvika kukirasi. Wake debut nokuti Juve akauya musi wa 17th waNovember munguva ye derby naTurino, paakazoita Totò Schillaci. Mumakore maviri epelp spell, akazova murume weJuve, achitamba mabasa akasiyana, achifunga 7 zvinangwa panguva Championship games uye 3 mukati UEFA Cup inoenderana.
Antonio Conte achitamba mazuva kuJuventus
Tende rake vakakunda UEFA Cup mumwaka we 1992-93. Pana 22nd May 1996, panguva Champions League final kupikisa Ajax, akakuvara mukupikisana naEdgar Steven Davids uye aifanira kuiswa panzvimbo. Mutambo wacho wakaguma muE1-1 kutevedza pashure pekuwedzerwa nguva, kumanikidzira chirongwa chekurohwa, izvo Juventus akakunda 4-2. Antonio Cotne akabata mutungamiriri we Juventus gore iroro (1996) mushure meRavanelli uye Vialli vakasiya boka.
Antonio Conte akasiya basa kubva muhutano ne Juventus mugore re2004. Akashandisa 13 makore (1991 - 2004) pachikwata, achiita kuoneka kwe296 uye kugovera zvinangwa zve 30.
Antonio Conte Utano Hwokutanga Plus Untold Biography Facts -Kutamba nokuda kweItaly National Team
Yaiva amai vaAlex Antonio Conte vakapindura foni kubva kuna Arrigo Sacchi, uyo ndiye mutungamiri weItaly National Head Coach. Mukudanwa kwake kwaiva kudana Antonio Conte nokuda kweCompute World Cup 1994 iyo yaizoitwa muU.SA. Kunyange zvazvo kutanga kwake kwakasvika mwedzi mishomanana kare, pana 27 May 1994, panguva yehutano hwemutambo wepamberi muParma kurwisana neFinland.
Antonio Conte aibatsira zvikuru muIndaneti yeUnited Nations 1994 Cup. Kunyange zvazvo team yake Italy yakarohwa neBrazil mukupedzisira. Konte yekukuvara kwekukuvadza kwakange kwasvika kuzomutsvaka pamakwikwi. Chiroto chake chekukwikwidza mumakwikwi chakaguma mumugumo wekupedzisira apo akatora gumbo rakarurama kugunun'una kunorwadza nechisimba chakabva kuRumanian Hagi. Kunyange zvazvo maItaly avo vakakundwa neFrance mumagumo.
Conte zvakare yakakwikwidza mu 2000 European Championships muBelgium neNetherlands, yakagamuchirwa neChita Coach Dino Zoff. Munguva yekutanga yekukwikwidza-robin kutarisana neTurkey, akawana izvo vazhinji vemauto pundit vaizoti 'Best Goal muEuropean' nhepfenyuro. Iri rakanga riri bhasikoro kukomba chinangwa. Kupemberera kwake kwaikosha.
Antonio Conte Chinangwa MuItaly
Antonio Conte akabva kumutambo weItaly wenyika mugore re2000. Akapedza makore 6 achitamba nyika yake. Akaita zvikamu zve 20 uye akawana 2 zvinangwa zvenyika yake.
Antonio Conte Utano Hwokutanga Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu (Anthonio Conte Love Story)
Apo Antonio akatamira kuTurin kuzotamba Juventus, akasangana Elisabetta, mwanasikana mukunda wemuvakidzani wake neshamwari inonzi Gianni. Akaramba achimuona, achimirira nguva yakakwana uye mukana wokutaurirana naye.
Pazuva rakatendeka, September 2004 zvakanyatsoitika, Elisabetta akapinda muBar muCorso Vinzaglio kuti ati kuna hi kuna baba vake uye akasangana naAlex Antonio, uyo aive achitaura nezvemutsva wechikwata chekutsvaga pamusoro pefivha. Kutarisa kwaiva zvose zvaidiwa musati nyaya yorudo pakati paAntonio naElbetetta vakapisa. Iyi yakanga iri nguva iye achangobva kuwana basa semutungamiriri webhola. Hazvina kutora nguva vasati vawana mwanasikana wavakatumidza Vittoria Conte. Akaberekwa mu2007.
Mhuri yaAntonio Conte (Iyo Inofara)
Antonio naElbetetta vakaratidza makore emakore 9 vasati vapemberera imba yavo yakauya pa 10th yaJune, 2013.
Antonio Conte's Wedding day
Antonio Conte murume chaiye wemhuri. Ndiye mumwe munhu anosanganisira zvose mudzimai wake nemwana mukufungidzira ramangwana.
Antonio Conte- Murume Mhuri
Anoziva maitiro ekugadzirisa kushungurudzwa kuitira kuti awane nguva yakanakisisa nemwanasikana wake anodiwa.
Pasina mubvunzo, anotungamirira pakugadzirisa mhuri yakanakira.
Antonio Conte nemwanasikana (Vittoria Conte)
Antonio Conte Utano Hwokutanga Plus Untold Biography Facts -Kutakura hama yake Alongside
Gianluca Conte ndiye munun'una waAnton Conte. Imwe nguva, vese vaviri mukoma vaive vese vadiki vatambi kumba kwavo kirabhu yeLecce. Moreso, vakadzidza pamwe paUniversity yeFoggia. Antonio Conte agara aenda nemunun'una wake padivi. Gianluca akashanda semuongorori nemunin'ina wake kuBari, Juventus, Italy timu yenyika neChelsea FC. Parizvino anoshanda semubatsiri weChelsea FC Murairidzi wekutanga wechikwata sep panguva yekunyora.
Antonio Conte Utano Hwokutanga Plus Untold Biography Facts -Basa Rinotungamirira
Asati asvika kuJuventus mu2011, Conte aiva Mutariri paBari. Akauya kuBari kusvika kumagumo e2007 apo Materazzi akarega. Kubudirira kweConte kwakatungamirira kukurudzirwa kwechikwata zvakare ku Serie A. Kunyange paBari, Conte akasarudza kubatanidza mabasa ose ekutarisa uye kuchikoro. In October 2008. Iye vakapedza kudzidza nekukudza zvizere mu Motor Sciences. Iye akaisa mukati "Manager psychology".
Cherechedzai: 'Kuongorora kwepfungwa yepamusoro kunoratidzira kune mashizha uye masangano wepfungwa, iyo inotarisa kubudirira kwevanhu, mapoka uye masangano mu kubasa. Chinangwa chayo ndechekubatsira zvakananga vatungamiri mukuwana kunzwisisa kwakanakisisa kwepfungwa dzepfungwa dzinowanikwa pakati pevanhu uye mapoka mukati memumwe sangano rakapiwa. '
Munguva yezvidzidzo zvake, Conte akanyora tsananguro yezvemitambo yepfungwa inonzi (Unhu hwemudzidzisi) sezvaakaongorora zvigadzirwa zvinoita kuti mutungamiri webhokisi ave mutariri akanaka weboka rake.
Akanga ane nguva shomanana paAtalanta kwegore ra 2010 / 2011. Izvi zvakateverwa nekuenda kwake Siena iyo yakanga ichangobva kuendeswa kuSerie B. Conte inofadza mumabasa ake ekutanga ekutungamirira kuSiena, kutora boka racho richikurudzirwa kuSerie A panguva yekuperesa kwake.
Antonio Conte - Kutanga Kudzidzisa Mazuva
Kubvumirana kwake kwakanaka kweboka kwakaratidzwa munguva yavo yeSiera B. Izvozvo zvakamuita basa paJuventus.
Kubudirira kwaAlex Antonio Conte naSiera B
Antonio Conte Utano Hwokutanga Plus Untold Biography Facts -2011 kusvika ku2013 Season neJuventus
Antonio Conte akapedza nguva mitatu naJuventus. Iyi nguva mitatu yakaunza iyo Old Lady muSaera A nhangemutange. Pazuva iroro rakatendeka, 31 May 2011, Conte akasarudza kusaina chibvumirano chemakore maviri iyo yakamusunga kukibhu ino yeTurin kusvikira 30 June 2013. Kusarudzwa kwake kwakadzokera kune mukuru mukuru bianconero basa. Basa iri rinowanzopiwa kuvatungamiri vemauto eItaly avo vari vaviri vari kutamba neboka ravo uye vakapfekedza chikwata chevatungamiri veboka ravo.
Conte akada Juventus kwemakore 13 uye akapfeka mutambi wechikwata chechikwata chema 5 makore.
Kuva mutambi wechikoro-yekare, zviitiko zvakakurumidza kusvika kwaari. Nyaya yake yekutanga yakavaona vakakunda Serie A Championship title.
The Antonio Conte Kubwinya mazuva paJudventus
Yaiva Juventus wake uyo akambogara asingatendi kuti aende 38 mutevedzana mitambo, kuputsa zvinyorwa zvekare kubva munguva ye 1949 / 1950. Kungofanana naArene Wenger, Antonio Conte kamwe chete ane nguva yake yekusagadzikana.
Antonio Conte achikandwa naJuventus Players
Conte akakunda zvitatu Seria A mazita mumakore matatu aive ari kutarisira. Akakundawo mazita maviri eScopcoppa uye akatumidzwa kuti Serie A mudzidzisi wegore mumakore matatu oga oga neAld Lady.
Antonio Conte Utano Hwokutanga Plus Untold Biography Facts -Upenyu seMutungamiri weNational National Team
Conte akadzoka kumutambo wake weItaly wenyika semutungamiri mukuru mushure memazana emakore 14 ekurega basa kubva kune rimwe rimwe boka rechikwata. Nemhaka yekuti aidiwa nevakawanda, Conte akapiwa basa rimwechete ne Italian Football Federation.
Antonio Conte Story seItaly Coach
Akashanda semutungamiri wenyika yese uye mutungamiri weChitari junior squad. Yake yekutanga yakauya neshamwari neNetherlands. Iyi kufamba yakaitika pa 4 September, 2014 uye yakaguma ne 2-0 kukunda.
Antonio Conte Utano Hwokutanga Plus Untold Biography Facts - Crazy Goal Celebration Style (SeMutambo uye Mutungamiriri)
Antonio Conte ane kodzero yekuenda penga mushure mekufungidzira zvisizvochinangwa muSvondo 2-2 inotora neAston Villa. Neville akati: "Ini
Kune chimwe chikonzero chisinganzwisisiki, vateereri dzimwe nguva vanofarira kuita chaizvo shamisa zvinhu kune mumwe nemumwe nguva kupemberera zvinangwa
Antonio Conte akapemberera chinangwa chekuita semutambi pamwe nemudzidzisi
Sevane maneja, Antonio Conte haafaniri kugara asina kukanganisa tenzi yake yakanaka kune iyo inyanzvi nzvimbo. Semudzidzisi, vazhinji vanomuona samambo wevashambadziri vanobata. Conte yakagadzira tsika yekupemberera kurwisana nevashandi vake vekodzero nevatsigiri. Vamwe vanomudana kuti 'The New Michael Jackson'. Zvisinei, vazhinji vanosarudza kumudana nezita rezita- 'MwariFather'. Tinokupai mamwe emhemberero dzeChris Goal Antotio Conte.
Antonio Conte Utano Hwokutanga Plus Untold Biography Facts -Nyaya naRafa Benitez
Conte haasi kutya kuenda kune-kwidzwane nevamwe vatungamiri. Mumutsara nemuimbova mukuru weBell Chelsea Rafa Benitez, vaviri vacho vakapinda muhondo yemashoko pamusoro pekuti Juventus kana Napoli vakanga vashandisa zvakawanda kune vatambi.
Antonio Conte Akafuridzira naRafa Benitez
Izvi ndizvo zvakataurwa naConte: "Takaisa mari 25 mamiriyoni muboka redu, vakashandisa kupfuura 100. Vakapedza mugore rimwe chete izvo zvatakapedza muzvitatu, asi ndezvimwe zvikamu zve17 shure kwedu uye kunze kweEurope. Vanhu vanoda kuziva chokwadi chavo uye kwete kuparadzira mashoko ekutsausa. Ndinotarisira Benitez anoongorora kuverenga kwake. "
Antonio Conte Utano Hwokutanga Plus Untold Biography Facts -The Great Tactician (3-4-3 chirongwa yakatsanangurwa)
Zvinyorwa zvake zvinoratidza kuti iye zvechokwadi imashiripiti. Conte akambotamba mitambo ye11, akanga ane 11 anowirirana, 25 zvinangwa zvakaitwa, 2 zvinangwa zvakagamuchirwa, uye zvakabva ku8th nzvimbo uye 8 inotarisa kufambisa kwePoint 6 zvakajeka kumusoro kwetafura. Izvi ndezvechokwadi, Chelsea rekodhi kubvira Conte yashandurwa kuva 3-4-3 maitiro. Imwe yenzira dzaConte dzakasarudzika ndiyo kushandiswa kwezvibatanidzwa munzvimbo dzakawanda. Kuongorora kwake kwepfungwa yake ye 3-4-3 maitiro kunotsanangurwa pasi apa.
Antonio Conte Utano Hwokutanga Plus Untold Biography Facts -Kuverenga Statistics
Ndinokutendai nokuverenga iyi chidimbu chakareba. Sezvenguva dzose, isu takapoteredza nekuzivikanwa kwedu nhamba dzinoenderana nekutsvakurudza kwakasimba.
Ona iyo yaAlex Antonio Conte Pasi;
Yakagadziridzwa zuva: Nyamavhuvhu 4, 2018